FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHIRANIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika shiranianina
Alika mifangaro Pomeranian / Shih Tzu mifangaro
Shiranians Emma amin'ny 3 volana (ambany) miaraka amin'ny rahavaviny 'lehibe' Sophia (ambony) 7 volana— 'Sophia dia hita milalao amin'ny baolina tenisiny, etsy ambony. Alika mahatalanjona tokoa izy ka nanapa-kevitra ny hanampy ny fianakavianay miaraka amin'i Emma Shiranianina hafa. Mahatalanjona sy mampiavaka azy manokana ny toetran'izy ireo. Azonao atao ny mahita fa ny fijerin'i Sophia dia manatrika ny lafiny Pom kokoa ary ny an'i Emma dia Shih-Tzu kokoa. Na dia zokiny amin'izy roa aza i Sophia, dia nampita ny habeny i Emma (i Sophia dia nipoitra teo amin'ny 4,5 pounds i Emma dia efa ho 6 taona ary vinavinaina hahatratra 9). Azontsika atao tsara ny manafoana ny fahitalavitra taribintsika ireto korontana ireto. '
Ny alika shiranian dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pomeranian ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Shiranian
Mpanoratra International Canine Registry®= Shiranian
Gizmo the Shiranian (Pom / Shih Tzu mix type) amin'ny 1 taona
Gizmo the Shiranian (Pom / Shih Tzu mix type) alika afaka 12 herinandro
Alika mifangaro mix Izzy the Shih Tzu / Pomeranian (Shiranian) amin'ny faha-7 volana— 'Izzy dia an'ny zafikeliko lahy rehefa nilaza i dada hoe' tsy maintsy mandeha ny alikakely 'ka hoy aho fa horaisiko izy. Izy no alika kely tsara indrindra nananako. Tena marani-tsaina izy ary mora nampiofana. Tsy mandatsaka izy fa mivoaka ny volo rehefa miborosy azy aho. Alika mpiambina tsara izy. Tiany ny milalao miaraka amin'ilay zanako vavy Siberianina Rosiana izay 1 volana zokiny noho i Izzy ary milanja 2 kilao mahery ny saka. Izy ireo no sakaiza tsara indrindra ary mampihomehy ahy. Rehefa tsy misimoka izy ireo dia milalao. Izy ireo ihany no hiara-cutest. Ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana dia tia an'Izy. Kely izy ary be hery sy be fitiavana. Manoroka foana izy. Tiako ny zava-misy fa tsy mila mitondra azy any amin'ny mpampakatra isam-bolana aho. Ny ilany dia fandroana 15 minitra ary maina fotsiny ary vita i Izzy. Izy no alika tsara indrindra nananako. '
Vausch ny alika kely Pomeranian / Shih Tzu mifangaro (Shiranian) alika kely
Rudy the Shiranian (Alika mifangaro Pom / Shih Tzu mifangaro) eo amin'ny 6 volana eo ho eo
Rudy the Shiranian (Pom / Shih Tzu mix dog dog) alika kely sahabo ho 3 volana
Alika shiranianina (alika mifangaro Pomeranian / Shih Tzu mifangaro), sary natolotry ny Faded Rose Kennel
Alika Shiranian (Pomeranian / Shih Tzu mix type), sary nahazoana lalana avy tamin'i Faded Rose Kennel
Lucy, alika shiranianina 9 taona
Maximus the Shiranian (karazany mifangaro Pom / Shih Tzu) amin'ny 6 volana sy efa ho 4 pounds— 'Manana toetra tokony ho faty izy, ary tovolahy tena mahaleo tena izay te ho tiavina. Hividy alika kely Shiranianina iray amin'ny nanosecond aho raha mijery. Tiany daholo ny olona - zazakely, ankizy, lehilahy, vehivavy, saka, alika hafa lehibe na kely. Feno azy fotsiny izy ary marani-tsaina be! Rivotra ny vaky trano! Na dia bitika sy saika mandondona ny tenany aza izy rehefa atsangano ny tongony, dia tiany ny mivoaka orana na mamirapiratra. Satria any Wisconsin izahay, ny mpitsara dia mbola mivoaka raha hamily ny fandrosoan'ny tranony ny lanezy. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Shiranian
Sarin'i Shiranian 1
mpiandry ondry aostraliana italiana italiana
pyrenees mahafinaritra sy fifangaroan'ny collie
inona ny androm-piainan'ny vorontsiloza
faladia ny rambon'ny alika
lisitra feno karazana alika